Faah Faahinta Heshiiska Liverpool La Gaadhay Difaaca Heerka Sare Ah Ee Kostas Tsimikas Iyo Tijaabada Caafimaadka Oo Uu U Soo Duulay. - Gool24.Net
Faah Faahinta Heshiiska Liverpool La Gaadhay Difaaca Heerka Sare Ah Ee Kostas Tsimikas Iyo Tijaabada Caafimaadka Oo Uu U Soo Duulay.
Kooxda Liverpool ayaa si layaableh ugu guulaysatay difaaca bidix ee aadka loo qiimeeyo ee Kostas Tsimikas kaas oo ay waliba ku heshay qiimo aad uga hooseeya inta waqti xaadirkan lagu qiimeeyo xidigaha dhigiisa ah ee kubbada cagta Yurub.
Kooxda dalka Giriiga ka dhisan ee Olympiacos ayaa si rasmi ah u aqbashay dalab 11.75 milyan gini ku qiimaysnaa oo ay Liverpool ka gudbisay difaaca bidix ee Kostas Tsimikas waxayna sidoo kale Reds hadda diyaarisay goobta uu xidigani tijaabada caafimaadka ku mari doono.
Kostas Tsimikas waa 24 sano jir u ciyaarayay kooxda uu hadda ka soo baxayo ee Olympiacos iyo xulka qaranka Giriiga laakiin waxa uu hadda u soo duulay dalka England isaga oo marka uu soo gaadho tijaabada caafimaadka ku mari doona Melwood.
Liverpool ayaa dhawaan meesha ka saartay in ay lacago badan suuqa kala iibsiga ku kharash garayn doonaan waxayna taas badalkeeda qaateen qorshe suuq layaableh oo ay ku doonayaan in ay kooxda Jurgen Klopp ku soo xoojiyaan ciyaartoy tayo leh balse ay qiimo hoose ku heli karaan.
Kostas Tsimikas oo si toos ah difaaca bidix ugula tartami doona Andy Robertson ayaa ah difaac bidix oo tayo sare leh wuxuuna soo muujiyay qaab ciyaareed keenay in Jurgen Klopp uu si buuxda ugu qancay in uu xidigan Anfield keeno.
War baahin badan oo kala duwan ayaa hadda xaqiijiyay in kooxaha Liverpool iyo Olympiacos ay si rasmi ah u dhamaystireen heshiiska Kostas Tsimikas laakiin 24 sano jirkan ayaan wali ogolaan qodobada heshiiskiisa shaqsiga ah wuxuuna heshiiskiisa ku saxiixi doonaa Melwood marka uu tijaabada caafimaadka maro.
Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in Liverpool ay ku dhawaaqi doonto dhamaystirka heshiiska Kostas Tsimikas kaas oo kadib qayb ka noqon doona ciyaartoyda uu Jurgen Klopp u diyaarin doono xili ciyaareedka cusub ee kooxdiisa Reds.
Kostas Tsimikas waxa uu saxiixi doonaa heshiis waqti dheer ah oo Liverpool ku sii hayn doona ilaa sanadka 2025 isaga oo si toos ah uga mid noqon doona kooxda kowaad ee Klopp hogaaminayo.
Jamaahiirta kooxda Liverpool ayaa markii ugu horaysay ee ay maqleen warka kooxdooda ee heshiiska Kostas Tsimikas waxay markiiba daawadeen muuqaalkiisa iyo shaqadii uu soo qabtay waxayna dareemeen in ay kooxdoodu soo heshay difaac bidix oo heer caalami ah.
Si kastaba ha ahaatee, wixii ka soo kordha wararka heshiiska Liverpool ee Kostas Tsimikas waxaad kula socon kartaan wararkeena soo socda isla marka ay xog cusubi ka soo baxdo.